Chii chinoitika kana bhatani repamba riri pa iPhone 7 ratsemuka? | IPhone nhau
Izvi ndizvo zvinoitika kana bhatani repamba reiyo iPhone 7 rikatyoka
Sezvo isu tichinyatso kuziva, gore rino Apple yakafunga kuenda nhanho imwe kumberi neImba bhatani reiyo nyowani iPhone. Pasina kuchinja chitarisiko chayo chekunze, chakakwanisa kutsiva zvikamu zvepanyama zvemukati mayo uye nekuzvitsiva neiyo taptic injini, ichipa akateedzana eakawedzera maitiro kuiyo iPhone inoita kuti, muchidimbu, zvirinani. Asi chii chinoitika kana chikaputsika?
Kunyange zvakadaro zvakanyanya kuomera bhatani idzva reKumba kutadza kushanda nekuda kwekushandisa nekuda kwechimiro chayo chitsva, inokanganisa kutadza, chokwadika. Nekudaro, Apple inoita kunge yakafunga pamusoro pazvo, ichipa mhinduro yechinguvana kudzamara taenda kubasa rehunyanzvi kukumbira kugadzirisa.
Sezvo ivo kuverenga mukati MacRumors, mushandisi anogona kunge atoona bhatani kutadza, iro rinoita kunge rinongoonekwa neichi chishandiso. Mukana wekutadza kweiyo taptic injini, isu tinoratidzwa bhokisi rebhokisi matinoziviswa nezvedambudziko, panguva imwe chete uchiwedzera bhatani reKumba pazasi kwekona. Hazvigoneki kuti izvi zvinotiyeuchidza nezve chimwe chinhu chakafanana neicho chatinogona kuwedzera nemaoko nekuita AssistiveTouch kubva kuGeneral> Kugona
Sezvo kukundikana uku kuchikwanisa kuita bhatani repamba risingashandisike Apple yakafanirwawo kushandura nzira yatinowana nayo Kudzorera maitiro kana DFU pane iyo iPhone, ikozvino kuve mubatanidzwa wesimba bhatani + vhoriyamu pasi iyo inotitora isu kuenda nayo (panzvimbo pesimba bhatani + pamba bhatani remhando yapfuura mamodheru).
Iyi ndiyo bhatani rekupedzisira reKumba ratinoona pane iPhone sekuriziva kwedu kusvika parizvino? Hatizive asi Kana iwe uchida kuziva zvese zvitsva izvo bhatani iri rinounza kune iyo iPhone 7, muvhidhiyo ino tinopa ongororo yehunhu hwayo hukuru uye mipiro yemhando nyowani yekambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Izvi ndizvo zvinoitika kana bhatani repamba reiyo iPhone 7 rikatyoka
Yakanaka kwazvo, uchifunga nezve iyo "Yakachengeteka nzira" yeJailbreak ^ ^!
YouTurbo, Anofara mavhiri ane "youtubera" theme
Yekupedzisira Yekufungidzira IV inowanikwa pane yakakosha dhisikaundi paApp Store